नयाँ भन्सार नीति! आयात र निर्यात मा प्रकट नियम परिवर्तनहरू! - चीन Longkou Fushi पैकिंग
PS फोम खाद्य कन्टेनर उत्पादन लाइन
PS फोम शीट निस्कासन रेखा
खाद्य कन्टेनर वैक्यूम बनाउन मिसिन
PS फोम पुनर्चक्रण मिसिन
एफएस-YTA1100 / 1400 रोबोट शाखा वैक्यूम काटन थाकबनाउदै मिसिन बनाउन
एफएस-YTA100 / 1100 वैक्यूम बनाउन काटन थाकबनाउदै मिसिन
एफएस-YTA600 / 1000 वैक्यूम बनाउन काटन थाकबनाउदै मिसिन
एफएस-YT600 / 1000 वैक्यूम बनाउन काटन Slicing मिसिन
प्लास्टिक वैक्यूम बनाउन मिसिन
बिरुवा ट्रे मिसिन
फोम ट्रे वैक्यूम बनाउन मिसिन
Epe निस्कासन रेखा
पीई फोम शीट निस्कासन रेखा
पीई फोम पाइप / रड निस्कासन रेखा
पीई फोम नेट निस्कासन रेखा
पीई सहायक मिसिन
बाहिर निकालन laminating मिसिन
पीई फोम शीट laminating मिसिन
पीई फोम शीट सम्बन्ध गाँसिसकेको मिसिन
पीई फोम पुनर्चक्रण मिसिन
पीई निस्कासन रेखा
फल प्रशोधन मेसिन
फल क्रमबद्ध मिसिन
फल धुलाई ग्रेडिंग मेसिन पहेँलो
नयाँ भन्सार नीति! आयात र निर्यात मा प्रकट नियम परिवर्तनहरू!
चीन भन्सार इनबाउन्ड प्रकट नियम 1th जुन, 2018 मा प्रभाव छ जो समायोजन गर्न आदेश No.56 जारी गरेको छ।
केही समायोजन उदाहरण को लागि बहिर्गमन पूर्व-प्रकट गरिएको हो,:
1.The पूरा र सही कार्गो जानकारी चीन भन्सार इलेक्ट्रोनिक 24 घण्टा पूर्व लोड गर्न / गर्न बोर्ड पोत जलयात्रा मा पेश हुनुपर्छ / मार्फत चिनियाँ बन्दरगाह बाहिर।
2.Shipper कर आईडी, SHIPPER सम्पर्क नम्बर, पूर्व-प्रकट मा मुख्य डाटा रूपमा consignee गरेको कम्पनीको नाम अनिवार्य क्षेत्रहरू हुन समायोजित छन्।
lading को बिल अन्तर्गत 3.All वस्तुहरु पूर्ण र सही ढंगमा प्रकट मा घोषित गरिनु पर्दछ। चीन भन्सार को घोषणा वस्तुहरु मा नकारात्मक सूची व्यवस्थापन लागू हुनेछ। भन्सार विनियमन गर्न कुनै पनि-एकरूप अस्वीकार गरिनेछ
धेरै ढुवानी कम्पनीहरु साथै सम्बन्धित घोषणाहरू जारी छ। र ग्राहकहरु ढुवानी कम्पनीहरु 'वेभसाइटमा प्रकाशित रूपमा कागजात काटिएको समय अघि सही र पूर्ण ढुवानी निर्देशन प्रदान गर्न आवश्यक छ।
के परिवर्तन यो समायोजन बारे ल्याउनेछ?
कार्गो मुख्य भूमि चीन आयात वा मुख्य भूमि चीन मार्फत transited लागि को रूप मा, कार्गो को पूर्ण र सही प्रकट डाटा ढुवानी, जुन 1st, 2018 अघि 24 घण्टा चीन भन्सार पठाइएको हुनुपर्छ इलेक्ट्रोनिक डाटा मार्फत।
पूर्ण र सही प्रकट डाटा को अर्थ के हो?
lading को बिल अन्तर्गत सबै cargos नाम स्पष्ट र पूर्ण प्रकट मा घोषणा गरिनेछ, र नयाँ प्रकट को समायोजन को लागि डाटा वस्तुहरू समावेश:
को consignor को 1.USCC
consignor को 2.Phone नम्बर
को SHIPPER को 3.Enterprise कोड
को consignee को 4.Name (वा विशिष्ट अवस्थामा "आदेशको" लेख्न तल)
को consignee को 5.USCC (को consignee छ भने "आदेश", त्यसपछि USCC आवश्यक छैन)
consignee को 6.Phone नम्बर (को consignee छ भने "आदेश", जानकारी त्यसपछि सम्पर्क आवश्यक छैन)
को consignor को 7.Name (वा विशिष्ट अवस्थामा "आदेशको" लेख्न तल)
को consignee को 8.Enterprise कोड
को सूचित पार्टी को 9.USCC को consignee छ भने "गर्न" आवश्यक छ।
को सूचित पार्टी को 10.Phone नम्बर consignee छ भने "आदेश" आवश्यक छ
यस प्रकट टूट पडना मा उल्लंघन सजाय हुनेछ?
पेनाल्टी ordinance प्रकट दाखिला मा उल्लङ्घनको सन्दर्भमा संग भन्सार द्वारा स्थापित गरिएको छ। ordinance को नाम जारी र 2004 मा प्रभावकारी भयो थियो, "चीन को जनता गणतन्त्र को भन्सार को प्रशासनिक पेनाल्टी को कार्यान्वयन ordinance" छ।
प्रक्रिया ग्राहकहरु 'जानकारी खुलासा नेतृत्व गर्छ?
नयाँ प्रकट समायोजन को प्रक्रिया ग्राहकहरु 'व्यापार संवेदनशील जानकारी खुलासा नेतृत्व गर्दैन।
संवेदनशील डेटा वस्तुहरू प्रकट (को consignee नाम बाहेक) थपियो वाहक द्वारा जारी lading को बिल देखाइने छैन। म्यानिफेस्टमा भन्सार पठाइएको छ पछि, भन्सार कर्मचारी अनुसार व्यवस्था संग व्यापार रहस्य र भन्सार काम गर्न सान्दर्भिक रहस्य रक्षा गर्नुपर्छ।
को जुन 1st माल भन्सार मार्फत जाने सजिलै, कृपया नयाँ प्रकट को दर्ता ध्यान र detained हुनबाट माल राख्न निश्चित गर्न, कुना वरिपरि छ!
पोस्ट समय: जुलाई-12-2018
मई 1st, 2011, चीन fo को प्रतिबन्ध उठाएर ...
यांत्रिक हात गठन मिसिन को लाभ
ठेगाना: LANGAO औद्योगिक क्षेत्र, Longkou सिटी, शेडोंग प्रांत, 265701, चीन
फ्याक्स: +86 535 8635389